Labo wiil oo xabsi lagu xukumay | Somaliska
Labo wiil oo Soomaali ah balse haysta dhalasha Sweden ayaa min 4 sano oo xabsi ah lagu xukumay ka dib markii la sheegay in ay qorshaynayeen in ay weeraro argagixiso ka geystaan dalka Soomaaliya. Wiilasha kala ah Maxamud Jamac oo 22 jir ah iyo Bile Ilyas Maxamed oo 26 jir ah ayaa lagu eedeeyay in ay ka mid ahaayeen Xarakada Al-shabaab ama ay taageerayaal ahaayeen ayadoo la sheegay mid ka mid ah in uu Soomaaliya tababar ku soo qaatay. Go'aanka maxkamada ayaa lagu saleeyay cadeymo laga helay wiilasha ka dib wareysi lala yeeshay, marqaatiyaal iyo telefoonadooda oo la dhageystay. Ragaan ayaa sanadkaan lagu kala qabtay magaalooyinka Stockholm iyo Göteborg.
Labo wiil oo Soomaali ah balse haysta dhalasha Sweden ayaa min 4 sano oo xabsi ah lagu xukumay ka dib markii la sheegay in ay qorshaynayeen in ay weeraro argagixiso ka geystaan dalka Soomaaliya.
Wiilasha kala ah Maxamud Jamac oo 22 jir ah iyo Bile Ilyas Maxamed oo 26 jir ah ayaa lagu eedeeyay in ay ka mid ahaayeen Xarakada Al-shabaab ama ay taageerayaal ahaayeen ayadoo la sheegay mid ka mid ah in uu Soomaaliya tababar ku soo qaatay.
Go’aanka maxkamada ayaa lagu saleeyay cadeymo laga helay wiilasha ka dib wareysi lala yeeshay, marqaatiyaal iyo telefoonadooda oo la dhageystay.
Ragaan ayaa sanadkaan lagu kala qabtay magaalooyinka Stockholm iyo Göteborg.